Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » I-Saint Kitts kunye neNevis Iindaba eziziiNgcaciso » I-75% yeSt Kitts kunye neNevis ekujoliswe kuyo kugonyiwe abantu
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • I-Saint Kitts kunye neNevis Iindaba eziziiNgcaciso • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Njengesiqithi esikude esikumbindi weCaribbean, iSt Kitts kunye neNevis benze inkqubela kule minyaka idlulileyo yokwakha uqoqosho oluzimeleyo. Ininzi yengeniso yelizwe ixhomekeke kukhenketho.
I-St Kitts kunye ne-Nevis urhulumente uchitha ngaphezulu kwe- $ 18 yezigidi ukulwa ubhubhane we-COVID-19.
Ikota ezintathu zeSt Kitts kunye neNevis ekujoliswe kuzo zigonyiwe ngethamo lokuqala lokugonya i-COVID-19.
Inkulumbuso ikwabulele amaqabane ase-St Kitts kunye ne-Nevis ngobubele babo ekuboneleleni ngezitofu zokugonya.
I-St Kitts kunye ne-Nevis zichithe ngaphezulu kwe-EC $ 18 yezigidi ukumilisela amanyathelo okususa ubhubhane we-COVID-19, utshilo u-Nkulumbuso u-Timothy Harris ngexesha lenkomfa yeendaba. Wongeze ukuba le mali yayisetyenziselwa ukufikelela kwizithuthi, iiwadi, indawo yokuvalelwa yedwa kunye noncedo lovavanyo. Iindaba ziza njengoko u-Nkulumbuso ebhengeze ugonyo lwedosi yokuqala ngaphezulu kweepesenti ze-75 yabemi ekujoliswe kubo kwi-Federation kwiveki ephelileyo.
I-St Kitts kunye ne-Nkulumbuso ye-Nevis u-Timothy Harris
Ngokuka-Nkulumbuso u-Harris, isongezelelo sezigidi ezintlanu zeedola kweli nyathelo lezempilo liya kuchithwa ukuphela konyaka. Oku kuyakuzisa indleko iyonke yenkcitho enxulumene ne-COVID-19 ngaphezulu kwe-EC $ 23 yezigidi.
Ngexesha lokuthetha kwakhe kwi-UN General Assembly, uvakalise isidingo sokuqhubeka nokutyala imali kwinkqubo yempilo eyomeleleyo. “Sikholelwa ngamandla ukuba akukho mntu ukhuselekileyo de wonke umntu abe ukhuselekile. Oko kufuna ukufikelela ngokulinganayo kwizitofu zokugonya kunye nezinye iimveliso zonyango, ”utshilo u-Nkulumbuso. “Sithathe amanyathelo ngokubonelela ngeenkqubo zokhuselo loluntu kwabo basweleyo. Ewe, siphumeze i-EC $ 120 yezigidi ze-COVID-19 yokuvuselela iphakheji. Sinciphise irhafu yengeniso yomqeshi kubaqeshi ukuze bagcine iipesenti ezingama-75 zabasebenzi saze sazisa iVAT kunye nokurhoxisa irhafu yokurhweba ngeemveliso ezinxulumene nobhubhane. ”
Inkulumbuso nayo ibulele St Kitts neNevisAbalingane bamazwe amabini ngobubele babo ekuboneleleni ngezitofu zokugonya. Umphathiswa wesizwe wezangaphandle u-Mark Brantley, owayese-New York kwi-UNGA, ubulele Inkulumbuso yase-India u-Narendra Modi ngokuququzelela ukuhanjiswa kwangethuba kwezitofu ze-COVID-19, athe zamenza wakwazi ukuya kumsitho.
Njengesiqithi esikude esikummandla weCaribbean, St Kitts neNevis wenze amanyathelo kule minyaka idlulileyo yokwakha uqoqosho oluzimeleyo. Ininzi yengeniso yelizwe ixhomekeke kukhenketho. Emva kokutshixwa kunye nokumiswa kweshishini lokhenketho, iimali zokuphumeza iNkqubo yokuNcitshiswa kweNtlupheko (PAP) - iskimu esijolise ekunikezeleni amakhaya anengeniso ephantsi ngemali engama- $ 500 yenyanga - aveliswa ngokudlula Ubumi ngeNkqubo yoTyalo-mali (i-CBI).
Ngokusebenzisa i-CBI, abatyali mali abaziwayo bamanye amazwe abaphumelela ngokuzimisela bayamkelwa ukuba bafumane ubumi obubalulekileyo baseSt Kitts kunye neNevis ukuze batshintshe igalelo lezoqoqosho. Inketho yengxowa-mali ibonelela ngeyona ndlela isebenzayo ukuya kubumi besibini.
Abatyalomali batsalelekile eSt Kitts naseNevis kuba ikhuselekile, idemokhrasi yanamhlanje. Yinto eyonwabisayo yosapho kunye notyalo-mali, apho abemi banokufumana ngokulula ukuhamba okongezelekileyo kwehlabathi, ukwahlula ubutyebi babo kunye neSicwangciso B.